Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Vanotamba Nhabvu Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rokuti "immobile". Ciro Yedu Immobile Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva ruzivo rwake rwakanaka hwokupedzisa asi vashomanana chete vanofunga nezveCiro Immobile's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Kutanga, Ciro Immobile akaberekwa pa 20th musi waFebruary 1990 pa Torre Annunziata, Italy. Akazvarwa kuna baba vake Antonio Immobile uye kuna amai vake Michela Immobile.
Kukura mudhorobha rake (Torre Annunziata inoratidzwa pasi apa) iyo iri pasi petsoka Gomo reVesuvius, vechidiki Vasingakwanisi kutamba bhora vakapa vabereki vake zvikonzero zvekuda kuziva nezvekuvaka kwavo.
Kushushikana kwavo kwakanga kusina zvishoma nezvekuvhenekera kwemhepo kwakapoteredza Gomo reVesuvius rakaparadza guta reAnunziunzi kaviri. Icho chainyanya kutarisa kuThis Immobile yekutsvaira tsika yekushandura mararamiro avo nemakamuri kusvika kumatambo ebhola raakatora shots nekusava nehanya.
Kusununguka kwehuduku hudiki hwakakonzerawo kushushikana pamusoro pekuchengetedzwa kwehanzvadzi yake, Luigi uyo aiwanzogadzwa kuti agamuchire izvo zvidhori, ruzivo rwakanga rusina kungovhiringidza utano hwemwana asi hunogonawo kumukurudzira kufamba nenzira inoparadza yehama yake mukuru.
Hazvina nguva refu vabereki vaImmobile vakaziva kuti nzira yakanakisisa yekuponesa imba yavo kubva pakuparadzwa kwakange kuri kupa chido chemwana wavo chikonzero chakakwana chekutaura nekumunyoresa kuchikoro chebhora rekumusha kwavo, Torre Annunziata '88 paakanga akwegura 5.
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Road Too Fame
Immobile yakaita makore anotevera e5 ehupenyu hwake kuna Torre Annunziata '88 kwaakanyora kukoshesa maitiro ake ekukwikwidza mahara munzvimbo dzekupedzisa. Basa rake rinoshamisa rakamuita kuti aende kuSerrento Calcio (mushure mekunge aomerwa kuzvidzivirira nekambani dzevechidiki dzeEmpoli neSalernitana) uko akawana 30 zvinangwa munguva ye 2007-08.
Zvinonyanya kuzivikanwa pakati pekusimudzira kwechidiki chechidiki chechidiki chakanga chiri kuenda kwake kuJuventus mu2008. Ari kutarisana neU19 nechechi yevechidiki, fomu yeMmobile top goalscoring form yakamuona achiputsa rekodi Renzo Cappellaro yeCNN-year-old rekodi uye akaita Serie A yake yekutanga apo aiva 50.
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Kunyange zvazvo masimba eImmobile aive mumakwikwi evechidiki akakwanisa kumuita mukurumbira wekune imwe nzvimbo iye akatamburawo matambudziko okukwira uye pasi kusvikira mukurumbira wakavhara suo rake paakazoenda kuTurino mu2013.
Zvakanga zviri paTurino izvo zvakasununguka zvakabuda mumvura yakadzama yekuderedzwa uye kusvibiswa nekukwikwidza pachikwata chake chechikwata uye akaunganidza zvikamu zve 23 zvese kubatsira Torino kupedza 7th pakuguma kwe 2013-2014 Serie A segore.
Zvinangwa zvake kuverenga iyo yaiva yakakwirira pane iyo nguva haina kungomuona achikunda zvakanyanya kudiwa Golden Boot (Capocannoniere) asi akabata pfungwa dzevashandi vaitsvaka kuchengetedza mabasa ake kuEurope makambani. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -ukama upenyu
Pamberi pemutambi wese weItaly anobudirira musikana kana musikana uye Immobile haisi yega. Munhu anonyanya kukwikwidza ari muukama hunogara nahwo Jessica Melena; a girlfriend and Model who became his wife.
Vaviri vacho vakaungana kuburikidza nehuwandu hwemagariro evanhu panguva iyo Immobile yakatambira Pescara. Hazvina nguva refu vasati vanyatsodanana zvikuru kuti Jessica aifanira kusiya zvinhu zvaimbova anodiwa, chokwadi chakazivisa panguva yehurukuro iyo yaiti:
Nokuda kweMweya, ndakabva, family and my roots. His love was like a tusunami that swept what used to be my former life and ushered me into new beginings.
Kutaura pamusoro pezvakaita kuti awire murudo uye zviitiko zvakatungamirira kumuchato wavo pa 17th yaMay 2015, Jessica akataura kuti akafadzwa nevamwe humwe unhu hwake hunosanganisira chido chake chisingaiti chekuita mukadzi kubva kwaari.
Imba yevakaroorana iyo inokomborerwa nevanasikana vaviri, zvisinei, hapana kukanganisa chokwadi chokuti baba vane rudo vangada kuva nomukomana semudzimai wake anoratidza:
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Tattoos Art
Vatambi vakawanda vanozivikanwa kuti vanopfeka uropi hwemuviri huri kuvhara pasi pasi asi iyo Immobile tattoo ndeye inokurudzira izvo vanhu vanokoshesa shure musangano wekuroora: kuvaka mhuri ine rudo. Anotora tattoo pasi apa se 'Njiva inonyangadza kuti isarambe ichitsvaga.' iyo inoshandurirwa 'Pano hupenyu hunotanga uye rudo haruzoperi.'
Asati aine mufananidzo wepamusoro Imobbile yaishandiswa kuva nehuwandu hwakawanda hwemifananidzo yemwanasikana wake wokutanga Michela kuruoko rwake rworudyi.
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Mishonga yeVideo Games
Vazhinji vevashandi vebhokisi vanoita chido chekuvhura kubva pakutamba mitambo yemavhidhiyo asi vashomanana vanoita kuti vaite zvekuita maitiro avo vashandurwe mumishonga yakafanana semmobile inoita seine dambudziko rakawandisa pakutamba FIFA17.
Kucherechedza kwakakweverwa kuImmobile's addiction munaOctober 2016 apo mudzimai wake, Jessica Melina akatumira vhidhiyo pamusika wake we Instagram kuti aratidze izvo vazhinji vakatsanangura semungozi yeFIFA17 inodhaka.
Vhidhiyo yakatora Jessica achiedza kutarisa kumurume wake uyo akamuvhara zvachose. Anogona kunzwiwa achikumbira "Darling iwe uri kuitei?" Asi Immobile yakanga yakanyanyisa mumutambo kuti aone kuti akanga aripo ipapo!
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Akambotambudzwa
Immobile yakanga iri pedyo nekuputirwa muna July 2018 nemuzambo wepikisa wepikisano Pescara paakanga achizorora pamhenderekedzo pamwe chete nemudzimai wake nevanasikana vaviri. Zvisinei, zuva rakasimuka richimhanyira kuImmobile's aid apo mapurisa ane zvombo akashandura muchiito nekusunga banga rekushandisa murume.
Izvo zvakakonzera zvakaratidza nyika yose mavhiringidziro avanoita nevanomuda vemakwikwi emakwikwi vanogona kutora mugumisiro wemitambo yebhola, maonero anogoverwawo nemuridzi wekuresitora iri pedyo negungwa.
"Handizivi munhu anorwisa. Ichi ndicho chiitiko chechiitiko chinoitika apo vanhu vanokoshesa zvikuru kuvimbika mubhoza. "
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu hwako
Kunyengedza mutambi akazvimirira uyo angamira pane chimwe chinhu kuti azviratidze seimwe yezvakanakisisa. Izvi zvinoratidzika mukusvika kwake kunoshamisa uye mafambiro epamusoro-kuenzanisa apo vazhinji vanofunga kuti basa rake rebhora rinopera.
Kunyanya zvakadaro, anonzwawo kudiwa kwekukombwa nerudo kubva kumhuri uye kunaka kubva kumukadzi wake.
Nezvekusava nesimba kwake, Kutadza kunogona kusindimara, godo uye kusagadzikana. Pamusoro pezvose, iye unyanzvi, anoda rudo uye ane mweya.
Ciro Immobile Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Haisi Kungoti tsamba nhamba
Apo vamwe vateereri vanopfeka nhamba dzinoratidzira mabasa avo mumunda pakutamba nhamba 17 paTear Leonardo Bonucci inopfuura mamwe mabasa uye basa. Nhamba yacho inoreva zuva rokuzvarwa kwomudzimai wake Jessica Melena, uyo akaberekwa munaJuly 17, 1990. Ichi ndicho chikonzero nei achiedza nguva dzose kuita kuti kambani ionekwe nejerseys depictipang nhamba inotarisirwa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nekuverenga Ciro Immobile Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Danieri Rugani Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Federico Chiesa Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Lorenzo Pellegrini Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Domenico Berardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Gianluigi Donnarumma Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Nicolo Zaniolo Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Andrea Belotti Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Lorenzo Insigne Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Marco Verratti Utano Hwokupedzisira Plus Untold Biography Facts
Leonardo Bonucci Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts